जब प्रधानमन्त्री देउवाको नमस्कारले प्रचण्डपत्नी सीताको आँखा रसाए.. – Halkhabar kura
‘तपाईंलाई कस्तो छ? तपाईंलाई नै म यहाँ भेट्न आएको,’ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पूर्वप्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पत्नी सीता दाहालसँग हालखबर सोधे। जवाफमा अशक्त प्रचण्ड पत्नीले टाउको हल्लाइन् मात्र। उनका रसिला आँखा नमस्कार गरिरहेका प्रधानमन्त्री देउवाको अनुहार निर्निमेष रोकिए।
Previous शिक्षक र कर्मचारी संगै इसिडि शिक्षकको पनि बढ्यो तलब,अब कसले कति पाउँछन् ?
Next जनतालाई राहतमा खसी देखाएर फर्सी दिने काम बन्द गरौं (भिडियोसहित)